भक्तपुरमा कांग्रेसको भव्य विजयोत्सव ! यसरी फहरायो चारतारे झण्डा (फोटोफिचर)::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, मंसिर १५, २०७६
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले भक्तपुरमा कम्युनिस्टको लालकिल्ला भत्काएपछि भव्य विजयोत्सव भएको छ ।
शनिबार भएको उपनिर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् ।
कांग्रेस उम्मेदवार कृष्णलाल भडेल १३ हजार ७ सय ४८ मत सहित प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भए भने उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी सत्तारुढ नेकपाका उम्मेदवार डीपी ढकालले ११ हजार २ सय १० मत पाए ।
कम्युनिस्ट सांसद महेश बस्नेतको गृहजिल्लामा कांग्रेसको जीतलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । उपनिर्वाचनमा नेमकिपाका निरज लवजुले ५ हजार ८ सय २९ मत पाएका छन् ।
उपनिर्वाचनका क्रममा जित्ने आँकलन गरिएको भक्तपुरलाई कांग्रेसले प्रचारप्रसारका क्रममा समेत महत्व दिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यमा भडेल विजयी भएपछि आईतबार नेपाली कांग्रेसले भव्य विजयोत्सव मनाएको छ ।
भक्तपुरको डेकोचामा भएको विजय सभामा निर्वाचित सांसद भडेलसहित भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा, मोहनबहादुर बस्नेत, रामहरि खतिवडा, तरुण दलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति रामशरण लामिछाने, रविन्द्रप्रताप शाह, गणेश लामा लगायतको उपस्थित थियो ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै नवनिर्वाचित सांसद भडेलले आफूलाई जिताउन रातदिन खटिएका नेता, कार्यकर्ता, सर्वसाधारण मतदालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । ‘म तपाईंहरूको मतको सम्मान गर्नेछु,’ उनले भने, ‘यहाँका जनताको लागि रातदिन नभनी काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु ।’